Xulka DR Congo oo u Soo Baxay Semi-finalka Koobka Qaramada Afrika “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xulka DR Congo oo u Soo Baxay Semi-finalka Koobka Qaramada Afrika “SAWIRRO”
Xulka DR Congo ayaa u soo baxay Semi-finalka koobka qarmada afrika,ka dib markii uu 4-2 uga badiyay xulka Congo.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Estadio de Bata ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta waxaa labo gool la hor maray xulka Congo,waxana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Ferebory Dore iyo Thievy Bifouma.
Xulka DR Congo ayaa afar gool ugu bedelay labadii gool oo uu la hor maray xulka Congo.
Xulka DR Congo ayaa afarta gool waxaa labo ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Dieumerci Mbokani,halka goolasha kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Jeremy Loteteka Bokila iyo Joel Kimuaki Mpela.
Xulka DR Congo ayaa markii u horeeysay ilaa sanadkii 1998-dii u soo baxay Semi-finalka koobka qaramada afrika.
Horjoogayaal ka tirsan kooxda Shabaab oo loo gesytay duqeyn xagga cirka ah